Published June 10, 2020 at 9:36 PM CDT
Governor Iowa Kim Reynolds coronavirus hir’isuuf seera kaahame hir’isuu jiruu.
Akka conference har’a ganamaatti, Reynolds Jum’aa sa’aati 8:00am irraa jalqabe businasnii kan akka mana nyaata, mana dhugaati fi mana tiyaatiraa harka 100% ni banama jedhaniiru.
Garuu umanni addaan fageenya akkuma eeganittii ta’uu qabaa.
Pooli daaki, bakka oltii ummata nama guddaa yeroo kaluuti nibanama jedhaniiru.
Reynolds akka jettiti virusichaan qabamun gadxiqqaachu jira, akkasumas qorannoo gochuun gudachu jira jedhan. Ummata Iowa harka 16 keessa harki tokko qoranno godheera. Akka manni fayyaa himmeeti harki guddaan magaala Woodbury county ta’uu gabaasan.
Irra guddaan hojjataan fayyaa akka jedhe namoota umriin isaani 65 oli fi dhukubaa biraa qaban ammas mana akkaa ta’an himan. Yoo virus qabamte yookin qabamu shakitan bulti 14 mana taa’u qabdan.
Kutaa Iowa keesati namni covid-19 qabame nama 22,600 yoo ta’u namni du’e 631 dha, Akkaata odeefanno website coronavirus har’a 4pm iraa arganati. Magaala Woodbury county nama qabame 3,000 ol gabaaste akkasumas duuti 38 gahera. Magaala Dakota County keessati namni du’e 30 gaheera.
Yeroo jalqabaatif erga lola addunyaa lamaffaa booda (World war 2) Iowa state fear hin argamu sababa covid-19 kuni ummata yaachisef, erga ji’a guutu itti yaadan booda, itti gaafataman board filannoo guyaa kanna dhumaratti murteese.
Department qabeenya uumama Iowa qaama bishaan irraa fi naanno bishaani akka irraa uf eegan himan.
Kunis erga du’anii guyyaa sadi booda, jidduu Sanbataa fi Wiyxatati. DNR akka himanitti Iowa kesatti wanni namni 5 ajjeecha umameef deebi kan kennan yoo ta’u. kunis kan walqabatu namni 2 Sioux land irrayi, 1 Browns lake kaluu Salix kan birraa ammo Kellen’s Ponderosa ala LeMars keessayi.
Akka gabaasni waliigalee mul’isuti irraa caalan midhamtoo jacketi jiruu ykn life jackets akka hin uffatin mul’isa.
Summaraaf pooli baay’en kan cufaman yoo ta’u. DNR akka himeti ummanii qabbana soquuf qaccee lagaati yaa’u kan jiran dha jedheera. Akkasumas ummanni addaan fageenya ufii akka eegan nama biraa irraa yaadachisan fi akka nama baay’e gurmuu dhan walhingene nama 10 gadi akka ta’u himan.
Gareen dalagtotta magaala Sioux City keessati bakka gugguurdaa bishaani cabee sirreedhuf dalaguu jirani.
Takkoo karaa intersection 7 ffaa fi kun karaa Water Street, kan biraa ammo karaa Orpheum theater biraa kan argamauudha.
Basimenti Orpheum fi mana kitaaba keessati gabaasni bishaani keesa jirachu hime.
Des Moines ti hirriri black Lives Matter kan bahee statehouse akka seera jijiira godhan gaadatani gafataan.
Seera baastonni seera poolisa fooyyeessuf cannabis akka murteesani fi hidhaan dargagoota akka dhaabatu barbaadu.
Seera baasan seera poolis foyyeesu irratti haaasawa gochuu jiru garuu murtiin hin kenamne.
Local News LocalIowaWoodbury CountyNebraskaSouth DakotaDes MoinesIowa Governor Kim ReynoldsnewsCOVID-19OromoBlack Lives Matter
Kamisa se’aati booda sababa du’aa George Floyd Minneapolisiti du’eef namni 3000 ol walgahii nagahaa fi fayyama magaala sioux City waliitti qabamani.Itti…